Ihe ndị bịara abịa Star Finn Wolfhard kwuru na Oge nke 4 ga -agba ọchịchịrị karịa - Pop Cult
Ihe nkiri Stnger Star Finn Wolfhard kwuru na Oge nke 4 ga -abụ ihe kacha gbaa ọchịchịrị
Oge 4 nke Ihe ndị ọbịa na -achọ ịgba ọchịchịrị karịa ka ọ dị na mbụ, ka Finn Wolfhard si kwuo.
Wolfhard, onye ama ama maka ịkpọ Mike na usoro Netflix a ma ama, na nso nso a pụtara na redio CBC Ajụjụ , ma nye ndị na-egwu egwu obere mkpụrụokwu gbasara ihe ha nwere ike ịtụ anya ya site n'oge a na-atụ anya ya nke ukwuu. Oge ọ bụla ọ na -agba ọchịchịrị. N'ezie, m ga -ekwu na Oge 3 ọ dị m ka, nke a bụ oge kacha agba ọchịchịrị nke agaghị adị, dị ka oke na -agbawa agbawa na ihe niile. Mana n'ezie, Oge nke 4 ruo ugbu a, bụ oge kacha agba ọchịchịrị kemgbe, ọ sịrị. Kwa afọ, ọ na -amịrị elu. Kwa afọ ọ na -atọ ọchị ma na -agba ọchịchịrị ma na -ewute ya, na ihe niile. Kwa afọ, ha na -emegharị ya ọnụ.
Wolfhardsoutlook yiri ka ọ dabara n'ihe GatenMatarazzo, onye na -egwu Dustin, nwere ikwu gbasara Oge nke 4 na ajụjụ ọnụ na US kwa izu onwa gara aga. Yikes, Matarazzo kwuru, na -agbakwụnye, echere m na ọ ga -abụ na ọ ga -asị na ọ bụ oge kacha njọ n'ime atọ gara aga, nke m hụrụ n'anya n'ihi na ọ na -atọ ụtọ ịse ihe nkiri.
ọcha chocolate ganache uzommeputa maka n'okpuru fondant
mark hamill na -agụ okwu Trump dị ka onye ọchị
Ụda ọchịchịrị nke Oge 3 pụtara ìhè mgbe nwanne nwanne Max Billy Hargroves kwupụtara onwe ya maka iri na otu mgbe Mind Flayer nwechara ya. Na ngwụcha oge, Jim Hopper pụtara ịhapụ ndụ ya mgbe a manyere Joyce imechi ọnụ ụzọ Upside Down mgbe ọ ka nọ n'ụzọ na -emerụ ahụ.
N'ụbọchị Valentines afọ gara aga, Ihe ndị ọbịa wepụtara obere vidiyo akpọrọ Site na Russia jiri ịhụnanya. Mkpokọta a na -egosi na Hopper ka dị ndụ, mana ọ hụla onwe ya n'ogige ụlọ mkpọrọ dị na Russia.
Site na Russia jiri ịhụnanya… pic.twitter.com/ZWEMgy63Et
esi mee ka cherry achicha ndochi
- Ihe ndị bịara abịa (@Onye ọbịa_Things) Febụwarị 14, 2020
Ọ bụ ezie na ọrịa na -amanye Onye ọbịa Th Ing kwụsịrị mmepụta n'afọ gara aga, onye na-emepụta ihe bụ Shawn Levy kwuru na oge ezumike nyere Duffer Brothers ohere ịhazigharị ederede, wee banye onwe ha ebe na-abanye na Oge 4 nke ha na-enwetụbeghị mbụ.
M na -ekwu naanị na ọrịa ọjọọ na -egbu oge na -agbapụ ya mere na mwepụta nke oge 4 ugbu a, ụbọchị ka bụ TBD, Levy gwara Collider afọ gara aga. Mana ọ metụrụ nke ọma site na ikwe ka ụmụnne Duffer, nke mbụ oge ọ bụla, dee oge niile tupu anyị agbapụ ya na inwe oge ịdegharị n'ụzọ nke ha na -enwetụbeghị mbụ ya mere ịdị mma ihuenyo a pụrụ iche, ikekwe mma karịa mgbe ọ bụla.
kedu ka esi eme achicha strawberry
esi akpụrụ a square achicha na buttercream
ihe omume ebe jim na -atụ aro ka ọ pam
esi mee ka ude mmiri sie ike
kedu ka esi eme fondant cake